Fiisa la’aanta Turkida ee Midowga Yurub - BBC Somali
Fiisa la’aanta Turkida ee Midowga Yurub
12 Juunyo 2016
Image caption Turkiga ayaa doonaya in muwaadiniinteeda loo ogolaado in Yurub ay galaan fiisa la'aan.
Dublamaasi British ah ayaa tilmaamay in UK lagu kordhinayo qorshihii dal-ku-gal la’aanta qaar ka mid ah dadka Turkiga, sida uu muujinayo dukumenti sir ah oo uu helay wargayska Sunday Times.
Waxay tilmaantay heshiiskaas in uu tixgalin siin doono dadka Turkida ah ee haysta “baasaboorka khaaska ah” kuwaas oo intooda badan ah shaqaalaha dawladda.
Midawga Yurub wuxuu taageerayaa in dadka Turkiga u dhashay loo ogolaado in ay dal-ku-gal la’aan ku safraan dalalka qaaradda Yurub ee isticmaala dal-ku-galka loo yaqaan Schengen, iyaduna ay markaas aqbalaan dad soo galooti ah oo inta ay hadda marti galiyeen ka sii badan.
Laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee Britain iyo dhiggiisa arrimaha dibadda ayaa sheegay in wax kasta oo tilmaamaya is badal lagu samaynayo dal-ku-gal la’aantu ay yihiin kuwo “been cad ah”.
Macluumaadkaas sirta ah ee laga helay saafaaradda Britain ay ku leedahay Ankara, wuxuu xiriir la leeyahay heshiiska Midaawga Yurub ee dal ku galka, kaas oo lagaga badalanayo in ay gacan ka gaystaan la tacaalidda qulqulka soo galootiga Suuriyaanka ah.
Heshiiskan Turkiga loogu ogolaanayo in ay dal-ku-gal la’aan ku tagi karaan dalalka isticmaala Schengen ayaa lagaga badalanayaa in Turkiga dib loogu celiyo soo galootiga Giriiga ka gala badda Aegean.
Midawga Yurubna wuxuu ka baqayaa in heshiiskaas oo aan la helin uusan Turkigu xakamayndoonin soo galootiga.